5 Izikhungo Ezinhle Zedolobha Elidala EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 Izikhungo Ezinhle Zedolobha Elidala EYurophu
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 23/01/2021)
Izikhungo ezihehayo zedolobha elidala eYurophu ziyisibonelo esihle kakhulu samandla omlando waseYurophu. Izindlu ezincane, amasonto ababhishobhi ahlaba umxhwele maphakathi nedolobha, izigodlo ezigcinwe kahle, nezikwele ezimaphakathi, engeza kumlingo wamadolobha aseYurophu. le 5 izikhungo eziningi zedolobha elidala ezithandekayo eYurophu ziye zahlala zinjalo phakathi namakhulu eminyaka.
Imibala, izakhiwo, nezinganekwane ziyaqhubeka zihlala futhi zime kuyo yonke imizi. Ukusuka ePrague kuya eColmar, Izikhungo zamadolobha amadala aseYurophu zikufanele ngokuphelele ukuvakashelwa kwakho, futhi okungenani impelasonto eyodwa ende.
1. IPrague Old City Centre, I-Czech Republic
Isikhungo sedolobha elidala elihle ePrague sihle ngendlela emangalisayo. Isikwele sedolobha sikhulu impela, ngama-bistros amahle, amathilomu, nezitebele zokudla. Isikwele yindawo enhle yokubukela abantu, ukunambitha Ubhiya waseCzech, namasoseji afakwe emanzini anosawoti ngenkathi kusalindwe umbukiso wewashi lezinkanyezi. Okugqamile enkabeni yedolobha elidala yi, kunjalo, umbhoshongo wezinkanyezi. Ngakho-ke ungamangali lapho ubona izixuku zezivakashi zihlangana esigcawini njalo ngehora eliyindilinga.
Isici esikhethekile sedolobha elidala elibukekayo ePrague izakhiwo ezinhle ezimibalabala. Isitayela seBaroque isonto iSt. UNicholas kanye nesonto le-14 le-gothic le-Our Lady ngaphambi kweTyn, akumelwe uphuthelwe. Isikhungo esidala sedolobha ePrague kulapho i- Imakethe kaKhisimusi iyenzeka, futhi isikhungo sedolobha esihle siguqula inganekwane emangalisayo.
Isikhungo sedolobha elidala elinomusa eSalzburg sihle ngokukhethekile futhi sihlukile. Ukuhlanganiswa kwezakhiwo zase-Italy naseJalimane, Iminyaka yobudala ephakathi kuya kuzitayela zekhulu le-19, dala esinye sezikhungo zedolobha ezinhle kakhulu eYurophu. Salzburg, owaziwa nangokuthi i-Altstadt iyi- UNESCO amagugu wezwe indawo kanye uhambo losuku oluhle ukusuka eVienna, ngezitimela.
Inhliziyo yedolobha elidala eSalzburg yikhaya elidala lenkosana, Izwe laseResidenz 180 amakamelo. Isikwele iResidenz kulapho ungajabulela khona imakethe enhle kaKhisimusi yaseZalsburg, futhi bukhoma amakhonsathi omculo. Futhi, qiniseka ukuzulazula enkabeni yedolobha elidala, ku-Residenz umthombo, Ikhaya lezingane laseMozart, neSalzburg Cathedral.
Idolobha laseSalzburg lisenyakatho ne-Alpes, ngezihlungi, nasemakhaya ngemuva. Umfula uwela elinye lamadolobha amadala agcinwe kahle kakhulu eYurophu ungeza ukubukwa kwamakhadi eposi.
3. IBruges Old City Centre, Belgium
I-Brugge, noma njengoba sonke sazi iBruges, ngomunye umuzi omuhle onendawo enhle yedolobha elidala. Kanye ikhaya lamaViking, namuhla kunjalo elinye lamagugu aseYurophu afihliwe. esetshenziswa’ imigwaqo emincane kanye cobblestone ezitaladini, amakhaya anemibala, futhi imisele iyenza ibe yindawo yamagugu ye-UNESCO.
Lapho uzulazula enkabeni yedolobha elidala eBruges, uzobona izitolo ezincane ezinikela ngentambo enhle. esetshenziswa’ I-lace idumile emhlabeni jikelele, ngakho-ke ngaphezu kokuletha izithombe ezinhle, I-lace izoba yisikhumbuzo esihle ongasiletha kusuka eBruges.
AmaBruges atholakala ngokuhamba komphakathi kusuka eBrussels, futhi ungahlola idolobha ngenqola, ngezinyawo, noma isikebhe ride. IMarkt yindawo enhle yokuqala uhambo lwakho eminyakeni edlule, futhi uqhubekele eBelfry ephawulekayo yaseBruges, kanye neSonto Lethu Lady Bruges. Uma ufuna ukuncoma isikhungo sedolobha elidala elinobuhle kusuka phezulu, bese umbhoshongo waseBelfry unikeza ukubukwa okuhlukile.
Amanani e-Amsterdam aya eBruges Train
Amanani entengo eBrussels kuya eBruges
I-Antwerp kuya eBruges Izintengo Zesitimela
IGhent kuya eBruges Izintengo Zesitimela
Isikhungo sedolobha elidala elinobuhle saseColmar ngenye yezindawo ezinhle kakhulu ukuvakashela e-Alsace. Isikhungo sedolobha elidala singesinye sezikhungo zamadolobha ezindala ezigcinwe kakhulu eYurophu. Izindlu’ Ama-facade alondoloze ubuhle babo obuhle obufana nekhadi leposi nobuhle kusukela ezikhathini zasendulo, futhi ungabona izakhi zakuqala ze-Renaissance kuzakhiwo ze-flamboyant.
IColmar izungezwe izivini, kanye nezici ezikhungweni zamadolobha amadala, uzothola isonto elihle iSaint-Martin. Enye into ongaphuthelwa yiLittle Venice eColmar, lapho uzothola khona izindawo zokudlela ezithandekayo, amabhuloho, kanye nemisele ongayihlola.
Kunezindlela eziningi zokukhetha indawo yokuhlala edolobheni elincane laseColmar, kodwa futhi ungajabulela isikhungo sedolobha elidala eColmar, on a day-trip from Strasburg. The wonderful vineyards are the perfect excuse for a French idolobha break futhi ngempelasonto uthole.
Amanani entengo eParis aya eColmar
IZurich kuya kumanani entengo yesitimela eColmar
I-Stuttgart kuya ku-Colmar amanani entengo
5. IFlorence Old City Centre, Italy
UDuomo waseFlorence, nombhoshongo wayo neCathhedral, lawula isikhungo sedolobha elidala eFlorence ngokuthandeka, ubukhulu, nobuhle. Isikhungo sedolobha elidala eFlorence singenye ye- 5 ebukekayo futhi enhle kakhulu eYurophu. Ukuqala kwakho kule ndawo yamagugu emhlabeni ye-UNESCO kuqala ePiazza del Duomo kuya ePiazza Della Signoria.
Uma ufisa ukuthola okuningi ngeFlorence, lapho-ke kufanele uqhubeke ne-Uffizi Gallery neBoboli Gardens. Ayikho indlela engcono yokufunda ngomlando nangamasiko wedolobha emakhulwini eminyaka ukwedlula ubuciko. IFlorence idolobha elihle lase-Italy, lapho ungathatha khona ipanini, ngaphandle kweDuomo. Uma unesikhathi, bese ukhuphukela phezulu esiqongweni seDuomo, ngoba ukubukwa obumangalisayo lomunye wamadolobha amahle kakhulu e-Italy.
Isikhungo sedolobha elidala laseFlorence siyi- uhambo losuku ukusuka eVenice. Nokho, kufanele unikele okungenani 2 izinsuku ezigcwele zokuhlola amasayithi namagugu kaFlorence.
Uma ufuna ukubuyela emuva esikhathini sangeNkathi Ephakathi ne-Renaissance, bese kuba lezi 5 izikhungo zedolobha elidala eYurophu ziwuhambo olufanele. Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele uhambo lwakho kulezi zikhungo zedolobha elidala kakhulu ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Izindawo Eziningi Ezinhle Zedolobha Elidala EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcharming-old-city-centers-europe%2F - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
citycenter Fairytaletowns oldcitycenter OldcitycentersEurope Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi TravelColmar travelflorence TravelPrague TravelSalzburg